Diiwaangelinta Musharaxiinta Madaxweynaha oo la soo gaba gabeeyay – STAR FM SOMALIA
Guddiga Doorashada Madaxweynaha Somaliya, ayaa waxay soo gaba gabeeyeen diiwaangelinta musharaxiinta u taagan jegada madaxtinimada dalka.
Dr. C/raxmaan Ducaale Bayle, Gudoomiyaha Guddiga Doorashada Madaxweynaha, ayaa sheegay in la soo gaba gabeeyay diiwaangelinta xubnaha u tartamaya xilka ugu sareeya dalka.
Gudoomiyaha, ayaa sheegay in musharaxiinta la diiwaangeliyay ay tiradoodu guud gaareyso 24 musharax. Diiwaangelinta musharaxiinta ayaa si rasmi ah u bilaabatay Khamiistii la soo dhaafay.
Guddiga Doorashada Madaxweynaha oo fadhigoodu uu yahay Villa Hargeisa, ayaa afartii maalmood ee la soo dhaafay ku qaabilaayay musharaxiinta. Villa Hargeisa waxay ku dhex taallaa Xarunta Madaxtooyada Somaliya (Villa Somalia).
Magacyada musharaxiinta is diiwaangelisay